Shinoa An-jatony Mpanao Lalàna Tao An-toerana Noroahana Noho Ny Raharahan-Tsolotra Faobe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Desambra 2013 11:45 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, srpski, Ελληνικά, Español, Català, English
Noroahan'ny tanànan'i Hengyang any atsimon'i Shina ny ankamaroan'ireo mpikambana tao amin'ny sampana mpanao lalànany rehefa hitan-dry zareo fa nandray an-tapitrisa dolara taminà resaka fanodinkodinana faobe ny voka-pifidianana
Araky ny tatitry ny Hunan Daily nivoaka ny 28 Desambra 2013, mpanao lalàna 518 tao Hengyang ary mpitantan-draharaha niisa 68 no tratra nandray tsolotra, ary 512 ireo mpanao lalàna voaroaka. Nahilik'ireo manampahefanam-paritra ireo solontena 56 izay tratra ho nanolotra maherin'ny 18 tapitrisa dolara amerikana mba ho tafiditra ao ho solontenam-paritra.
Araka ny ambaran'i Qiao Mu, talen'ny Ivontoerana Fianarana momba ny Fifandraisana Iraisampirenena ao amin'ny Anjerimanontolon'ny Fianarana teny vahiny ao Beijing, lasa làlana iray ahafahana manokatra ny varavaran'ireo tambajotranà politisiana sy mpandraharaha ny maha-mpikambana ao amin'ny kaongresy. Lasa olana niparitaka be ny fividianana vato nanomboka tamin'ny nampidiran'ny antoko tao anatin'ny taona vitsivitsy ny resaka fifaninanana amin'ny fifidianana miainga eny ifotony .
Sary an'i Zhao Guoping mpanao sariitatra, tao amin'ny Sina Weibo
Nanoratra ny mediam-panjakana Xinhua hoe :
Tsy maintsy natao ny fanadihadiana lalina sy ny fanasaziana henjana mba hihazonana ny lazan'ny antoko sy ny fitokisan'ny vahoaka ny rafitra politika fototry eto amin'ny firenena.
Nanazava ny lanjan'ilay fihetsika nataon'ny manampahefana ny China Daily :
Mampiseho ny filàna ezaka matanjaka hanorenana rafi-pifidianna madio sy mangarahara ny tantara ratsin'ny kolikoly tao Hengyang
Mahatonga ireo marobe mpampiasa tranonkala hanontany ilay tantara ratsinà kolikoly hoe: voafetra ho tao Hengyang irery ve ilay kolikoly ?
Nanontany tena [zh] ilay mpisolovava, Huang Leping:
Avy taiza ny vola? Ohatrinona no tombony azon'ilay olona taorian'ny fifidianana? Nampipongatra ny olana misy hatrany ifotony amin'ny rafitra fifidianana misy amin'izao fotoana izao ilay resaka kolikoly tao Hengyang, loharano roa no manohana ny fifidianana: vola ny iray, fahefana ny iray.
Nametraka fanontaniana vitsivitsy i Shi Shusi, mpanao gazety :
Nosaronan'i Hunan ny raharahan-kolikoly tao Hengyang tamin'ity indray mandeha ity, izay toy ny lakolosy fanairana mendrika tehaka, hiasa ho toy ny lakolosy fanairana izy io amin'izay fifidianana rehetra hataon'ny MPC. Kanefa, ny fanontaniana fototra dia ny hoe : Inona no tena loharano lehibe miteraka ny kolikoly? Ahoana no tena hahafahana misoroka azy io tsy hitranga intsony amin'ny hoavy? Ahoana no hahafahana miantoka fifidianana tsy mitanila sy malalaka?
Nanely i Zhang Liyuan, mpiandraikitra fandaharana aminà TV hoe :
Tsy resaka kolikolin'olon-tokana mihitsy izy ity, na ahoana na ahoana, rehefa tsy omenao ny tena zo ho afaka hifidy ny olona, dia ho tantara tsàngana ataon'ireo manampahefana ihany ny fifidianana. Fametrahana fepetra ho anà rafi-pifidianana demaokratika ihany no ala olana, fa tsy hoe fotsiny fanasaziana ireo tomponandraikitra ambonimbony vitsivitsy noho ny raharahana kolikoly.
“Hong Jingtian” nihevitra fa lavitry ny fiainan'ny olom-pirenena tsotra raha ny fifidianana fotsiny amin'izao :
Raha ny marina, ny tranganà kolikoly ao Hunan dia tendro kely monja aminà vongan-dranomandry iray lehibe. Jereo ireo fifidianana isam-bohitra manerana ny firenena, zava-mahazatra fahita ny kolikoly. Ho an'ny olon-tsotra, tsy manova na inona na inona na iza na iza lasa manampahefana, na iza na iza manome vola azy dia hahazo ny vaton-dry zareo. Izany eo ihany, fa mitovy daholo ihany koa ny olona voafidy.
Araka ny media sosialy, tsy zava-miafina ny raharaha kolikoly tao Hengyang. Tany am-piandohan'ity taona ity, efa nifanaretsaka tany anaty gazety mpanadihady samihafa tao Shina ilay raharaha, saingy tsy afaka namoaka izany ry zareo noho ny faneriterena sy ny sivana. Dokotera Liu Yun avy ao amin'ny Fianarana ambony momba ny Toekarena ao Haikou dia nanoratra hoe:
Ho fanampin'ny famborahana ny vokadratsin'ilay rafi-pifidianana, mendrika marihana ihany koa fa ny hany azo hijerena sy hamoahana ny raharahana kolikoly avo lenta midadasika tahaka izany dia ny fitsabahana avy hatrany any an-tampony any amin'ny governemanta foibe.